Chelsea Oo Kaalinta 3aad Xaqiijisatay & Everton Oo Guul Soo Laabasho Waali Ah Ku Badbaaday Xilli Frank Lampard Uu Sii Joogayo Premier League - Laacib
HomeWararka CiyaarahaChelsea Oo Kaalinta 3aad Xaqiijisatay & Everton Oo Guul Soo Laabasho Waali Ah Ku Badbaaday Xilli Frank Lampard Uu Sii Joogayo Premier League
Chelsea Oo Kaalinta 3aad Xaqiijisatay & Everton Oo Guul Soo Laabasho Waali Ah Ku Badbaaday Xilli Frank Lampard Uu Sii Joogayo Premier League
Chelsea ayaa barbaro gool ah iyo gool ah waxay garoonkeeda Stamford Bridge kula gashay Leicester City iyagoo xaqiijistay inay ku dhameysan doonaan xilli ciyaareedka Premier League kaalinta seddexaad.
Gool uu Leicester hogaanka ugu dhiibay Maddison ayaa waxaa barbareeyay Alonso isla qeybtii hore ee ciyaarta. Natiijadaana ayaa la micno ah in Chelsea ay ku dhameysan doonto xilli ciyaareedka kaalinta 3aad madaama ay seddex dhibcood ka sareeyaan Tottenham islamarkaana ay farqiga goolasha aad uga badan yihiin iyadoo hal kulan uu ka harsan yahay xilli ciyaareedka.
Chelsea waxay kulankeeda ugu danbeeya xilli ciyaareedka ku soo gabagabeyneysaa kulanka Stamford Bridge ku martiqaadayaan kooxda Watford.
Leicester City ayaa hogaanka la hormartay daqiiqadii 6aad ee ciyaarta, waxayna gool ku dhaliyeen weerarkoodii ugu horeeyay markii Maddison uu ka faa’ideystay difaacasho xumo ay sameysay Chelsea isagoo shabaqa ka soo taabtay goolhaye Mendy.
Chelsea ayaa goolka barbaraha heshay daqiiqadii 34aad iyadoo goolka ay isla sameeyeen labada daafac garab. Reece James ayaa kubad macaan u soo qaaday Alonso oo shabaqa si fantastik ah u dhex dhigay.
Waa goolkii afaraad uu Alonso dhaliyo xilli ciyaareedkan halka Reece James uu caawiye ka noqday goolkii 8aad ee Premier League.
Barbaro gool iyo gool ah ayaa lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Bartamihii qeybta labaad Christian Pulisic ayaa kubad gool loo fishay oo u baahneyd inuu shabaqa ku taabto ka qasaariyay Chelsea.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro gool iyo gool ah.
Dhanka kale Everton ayaa kulan waali ah oo ay soo laabasho fantastik ah sameysay isku badbaadisay ka dib markii ay 3-2 ku garaaceen kooxda Crystal Palace.
Crystal Palace ayaa labo gool ku hormartay qeybtii hore ee ciyaarta iyadoo Frank Lampard uu walwal xoog leh soo foodsaaray waqtigii nasashada oo 2-0 lagu marsiiyay.
Laakiin Everton ayaa soo laabasho sameysay iyadoo Keane uu gool u soo celiyay daqiiqadii 54aad ka hor inta uusan ciyaarta barbareynin Richarlison daqiiqadii 75aad halka Calvert-Lewin uu goolka guusha dhaliyay daqiiqadii 85aad.
Guushaan ayaa Everton ka badbaadisay inay u dhacdo heerka labaad oo ay qarka u fuushay xilli ciyaareedkan, waxayna kulanka Arsenal ciyaarayaan maalinta Axada iyagoo ogsoon inay badbaadeen.
Everton waxay afar dhibcood ka sareeyaan kooxaha Leeds iyo Burnley iyadoo hal kulan uu xilli ciyaareedka ka harsan yahay. Sidaasi darteed Everton waa ay badbaaday halka Leeds iyo Burnley midkood uu hari doono maalinta Axada.